फागुन २०, २०७४ बिगुल न्यूज - DG
काठमाडौँ: – हामी अक्सर देख्छौँ कि जब कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, तब उसको नाक र कानमा कपास राखिन्छ। यस्तो किन गरिन्छ त ? के यसको पछाडी कुनै धार्मिक मान्यता तथा वैज्ञानिक तथ्य छ ?
मृत शरीरको नाक र कानमा कपास राख्नुको पछाडी वैज्ञानिक तथ्य छ। वैज्ञानिक तथ्य अनुसार मृत शरीर भित्र कीटाणु छिर्नबाट रोक्नका लागि नाक र कान कपासले बन्द गरिन्छ। यस बाहेक मृत शरीरको नाकबाट एक तरल पदार्थ बग्छ जसलाई रोक्नका लागि कपासको प्रयोग गरिन्छ।
अर्को कारण धार्मिक ग्रन्थसँग जोडिएको छ। हिन्दु ग्रन्थ गरुन पुराण अनुसार मृत शरीरको खुल्ला हिस्साहरुमा सुनको टुक्रा राखिन्छ, जसलाई शरीरको नौ अंगहरुमा राखिन्छ।
सुनको टुक्रा धेरै पवित्र हुन्छ, यसलाई मृत शरीरमा राख्दा देहको आत्माले शान्ति मिल्ने विश्वास गरिन्छ। तर नाक र कानको प्वाल ठुलो हुने भएकोले त्यसमा राखिएको सुनको टुक्रालाई खस्नबाट जोगाउन नाक र कानमा कपास राखिन्छ। एजेन्सी
प्रकाशित : आइतबार, फागुन २०, २०७४१३:४९
कसरी बनिन त मृत छोराको शुक्रकिटबाट नाती नातिनाको हजुआमा यि महिला